China Sea kukumba Peptide ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Huayan
Peptide kukumba mmiri bụ obere peptide molecule, a na-enweta ya site na kukumba ohuru ma ọ bụ nke a mịrị amị site na teknụzụ mgbaze bio-enzyme. Ha bu otutu peptides collagen ma nwee isi azu di iche. Na mgbakwunye, kukumba oké osimiri nwekwara glycopeptides na ndị ọzọ na-arụ ọrụ peptides. Ihe ndi ahu nwere calcium, monopoly-saccharide, peptide, saponin kukumba na amino acid. E jiri ya tụnyere kukumba nke oké osimiri, mmiri kukumba polypeptide nwere ezigbo physicochemical Njirimara dịka solubility, nkwụsi ike na obere viscosity. Ya mere, enzymatic hydrolysis nke oké osimiri kukumba peptide nwere elu bioavailability karịa ọsọ oké osimiri kukumba ngwaahịa. A na-eji ya eme ihe na nri na ngwaahịa nlekọta ahụike.
Agba: Ìhè odo ma ọ bụ aja aja ntụ ntụ
Isi: Specialsì azụ azụ pụrụ iche
Ngwa nri na-edozi ahụ: mmiri kukumba monopoly-saccharide, polypeptide, 18amino acids, toxin kukumba n'oké osimiri, taurine, osimiri kukumba glycoside wdg.
Osimiri kukumba nwere glycopeptides na peptide ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike, obere poly-peptide molecule nwere ọtụtụ ihe, ọ nwere ezigbo physicochemical Njirimara dịka solubility, nkwụsi ike na obere viscosity. Ọ bụ ezigbo nri maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, akwara obi na ọrịa ụbụrụ.
1 Na-alụ ọgụ ike ọgwụgwụ, mee ka anụ dị larịị ma na-agbanwe agbanwe, mee ka ịka nká na-egbu oge.
2 Meziwanye ahụ ọgụ;
3 na-ewedata shuga dị n’ọbara, na-achọpụta akụrụ na ọbara na-edozi ahụ.
Nke gara aga: Azụ Pepe
Osote: Soybean Peptide